Ka faa'idayso Falanqaynta Saadaasha si aad U FUDUDDIDA waddadaada si aad u hesho aragtiyo wax -ku -ool ah, GUDBINTA go'aanka iyo soo -saaridda natiijooyin ganacsi oo waara. Dunida maanta xudunta u ah tiknoolajiyadda, horumarka tikniyoolajiyadda ayaa suura galiyay horumarka suurtagalka ah ee Falanqaynta Xogta ee xalalka BI ee soo jireenka ah iyo xalka falanqaynta saadaalinta iyo qoritaanka. Falanqaynta Saadaashu waxay ka caawisaa saadaalinta itimaalka iyo isbeddellada mustaqbalka iyo go'aan qaadashada degdegga ah. Waa farsamada ugu badan ee shirkaduhu ay ku aqoonsadaan "qiimaha cusub" ee ku dhex jira xogta ay hayaan iyadoo la saadaalinayo fikradaha, isbeddellada mustaqbalka iyo in la gaaro go'aanno wanaagsan oo lagu dardargelinayo koritaanka ganacsiga.
2. Falanqaynta degdegga ah ee lagu cabiray saacado ama maalmo (halkii ay ka ahaan lahayd bilooyin khaldan oo macdan qodis dhaqameed)
Falanqaynta Saadaasha waxay adeegsataa farsamooyin kala duwan si ay u hormariso moodooyinka saadaasha waxayna caawisaa saadaalinta aragtiyaha iyo qaababka.
Teknolojiyadaha xogta waaweyn ayaa door muhiim ah ka ciyaara falanqaynta saadaalinta tan iyo markii ay bixiyaan sirdoon ku saabsan mustaqbalka iyagoo adeegsanaya fikradaha Xogta Weyn. Teknolojiyadaha Xogta Weyn waxay falanqeeyaan xog fara badan oo xog ah waqtiga dhabta ah, oo ay ku jiraan xog habeysan oo aan nidaamsaneyn, iyo fikradaha ka soo baxay falanqeyntan ayaa looga faa'iideysan karaa si loo wanaajiyo waxtarka hawlgalka, sahaminta fursadaha dakhliga cusub iyo faa'iidooyinka tartanka. Barnaamijka falanqaynta xogta weyn waxaa loogu talagalay inuu la shaqeeyo barnaamijyada xogta waaweyn, kuwaas oo ka kooban kaabayaasha, hufnaanta, muuqaalka, maaraynta, iyo lakabka falanqaynta. Lakabka gorfaynta ayaa ah qaybta ugu muhiimsan ee dhisida xalka falanqaynta saadaasha ee qaab dhismeedka xogta weyn ee shirkad. Falanqaynta Saadaasha ayaa tilmaamaysa qaababka macnaha weyn leh ee Xogta Weyn si loo saadaaliyo dhacdooyinka mustaqbalka loona qiimeeyo suurtagalnimada natiijooyinka kala duwan ee suurtagalka ah si shirkaddu ay u gaarto go'aanno caqli badan
Waxaa jira shirkado badan oo adeegsada Falanqaynta Saadaasha. Tani ma aha oo kaliya inay ka caawiso iyaga sahaminta fursadaha cusub ee suuqa, hagaajinta waxtarka hawlgalka ee geeddi-socodka ganacsiga, xoojinta daacadnimada macaamiisha iyo haynta laakiin sidoo kale waxay u oggolaanaysaa iyaga inay si hufan u hantaan habka bartilmaameedka macaamiisha iyo sahaminta moodooyinka cusub ee ganacsiga. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka ganacsi ee tilmaamaya ayaa ah
6. Aaladaha Falanqaynta Saadaasha:
R, Apache Spark, HP Haven Falanqaynta Saadaasha, Actian Vortex Express, Macdanta Macluumaadka Konstanz.
Google Prediction API, Barashada Mashiinka Azure ee Microsoft, BigML, PredictionIO
Fahmaan hadafka dhamaadka ee Falanqaynta Saadaasha ee ururka.
Ka dhig kuwa isticmaala ganacsiyada ku mashquulsan waxa Falanqaynta Saadaashu ka caawin karto inay gaaraan.